I-Tiny-House I Biolandhof Bodensee - I-Airbnb
I-Tiny-House I Biolandhof Bodensee
Indlu encane ibungazwe ngu-Christian
Ezindlini zethu Ezincane ezikhiqizwe ngobuhlakani, sikunikeza ithuba lokuya eholidini lapho ungagxila khona ezintweni ezibalulekile. Sigxila enhlalakahleni encane, lapho ukuphumula nokuzilibazisa kuza kuqala.
Izindlu zethu zamaholide ezinefenisha enethezekile zikumema ukuthi uphumule. Kude nomsindo nethrafikhi, ungajabulela ukubuka okuluhlaza ezindlini zethu ezincane ezinezikhukhula, ezingamamitha angu-3.5 ukuphakama ezinethala lazo.
Izindlu zethu ezincane zinezindlu zokugezela ezinhle, ilineni lombhede, amathawula namathawula okugeza. Ikhishi elihlome ngokuphelele elinesiqandisi, ihhavini kanye nomakhi wekhofi kanye ne-TV, indawo yokushisisa ngaphansi nezindawo zokupaka izimoto. I-WiFi nokuhlanza okokugcina kufakiwe entengweni. Izinkukhu namaqhude epulazini lethu futhi akunikeza insizakalo yemvelo nemahhala yokuvuka.
Izindlu zinendawo yokulala elingana no-7sqm enombhede ongu-180cm x 2m, kanye nosofa ongagoqwa ube ngumbhede ongu-120cm x 2m.
Izinketho eziningi zokuthenga nezokudlela zitholakala cishe kumakhilomitha ama-2 ukusuka lapho. Esitolo esincane sepulazi esizeni ungathenga imikhiqizo yethu ngezikhathi ezithile noma ungazikhethela wena ezihlahleni zezithelo.
Ingabe uyazithanda izinsuku zokuphumula phakathi nemvelo, ibanga elingu-3km kuphela ukusuka eLake Constance? Bese sibheke ngabomvu ukukwamukela ku-Biolandhof-Bodensee.